XOG:- Ugaas Xasan Ugaas Maxamed oo xayiraad dhinaca socdaalka ah la saaray (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Ugaas Xasan Ugaas Maxamed oo xayiraad dhinaca socdaalka ah la saaray (AKHRISO)
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ay xayiraad dhinaca socdaalka ah saareen Ugaaska Beesha Cayr/Habargidir Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur.
Maamulka Ahlu-sunna ayaa la sheegay in Ugaas Xasan Ugaas Maxamed ay u diideen inuu ka baxo gurigiisa ku yaala magaalada Guriceel, kadib markii ay ku eedeeyeen inuu qorsheeynayay inuu ka qeyb-galo shirka dhawaan ka dhici doonno magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug.
Magaalada Cadaado ayaa haatan waxaa ka socoto qaban-qaabada doorashada dhici doonta sanadkaan 2016-ka, kaas oo lagu soo xulaayo xildhibaanada labada gole ee deegaanada Galgaduud iyo Mudug.
Inkastoo xayiraadda la saaray Ugaas Xasan uu beeniyay Nabadoon Cali Xaashi ayaa hadane waxaa la sheegayaa in Ugaaska uu weli ku xayiran yahay magaalada Guriceel, halkaas oo ay haatan gacanta ku haayaan maamulka Ahlu-sunna Waljameeca.
Ma jirto warar kale oo madax-badaan oo xaqiijinaya in xayiraadda laga qaaday Ugaaska beesha Cayr/Habargidir, Ugaas Xasan Ugaas Maxamed iyo inkale, waxayna xayiraadaan noqoneysaa markii labaad oo ay Ahlu-sunna ishor-taag ku sameeyso Ugaaskaas.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dhamaan doonno, waxaana haatan socda wada-hadalo u dhaxeeya maamulka Ahlu-sunna Waljameeca iyo Waxgaradka ku sugan magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, waxaana ilaa iyo haatan la ogaan karin natiijadda kasoo bixi doonta wada-hadalkaas.